Ruushka oo Dacish-ta Suuriya ka duqaynaya gudaha dalka Iiraan. – Radio Daljir
Ruushka oo Dacish-ta Suuriya ka duqaynaya gudaha dalka Iiraan.
Agoosto 16, 2016 10:58 g 0
Tehran, Aug 17 2016–Wasiirka difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegay in ciidanka cirka ee dalkiisu ay adeegsan doonaan saldhiga ciidamda ee Hamadan ee galbeedka Iiraan si ay u duqeeyaan fariisimada ISIL ee dalka Suuriya.
Ruushka ayaa mar hore fariisinkaasi geeyey diyaaradaha meelaha dhaadheer wax ka duqeeya iyo gantaalaha ridada dheer si ay u garaacaan fariisimada kooxaha Mucaaradka ee dalka Suuriya.
Waa markii ugu horeysey ee ciidamada cirka ee dalka Ruushku ay duqaymaha dalka Suuriya kasoo qaadaan fariisimo ay kuleeyihiin gudaha Iiraan tan iyo markii ay bilowdeen duqaymaha kadhanka ah kooxaha kasoo horjeeda dowladda Bishar Al-asad.
Tallaabadaani ayaa noqotay mid siweyn looga hadalhayo bariga dhexe waxaana ay qayb katahay xiriirka sida qabow usoo wanaagsanaanaya ee u dhexeeya Moscow iyo Tahraan.
Madaxweynaha Puntland oo ku wajahan wadanka Itoobiya.
Ciidamada Israa’iil oo sanadkaan xiray carruurtii ugu badnayd ee reer Falastiin.